Ihe Ga-enyere Gị Aka Ịna-ege Ntị nke Ọma | Ihe Ndị Ga-enyere Ezinụlọ Aka
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bengali Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Mongolian Myanmar Nepali Norwegian Oromo Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tetun Dili Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Xhosa Zulu
Nwaanyị nwere ike ịsị di * ya: “Ntị gị adịghị n’ihe m na-ekwu.” Di ya asị ya na ya na-anụ. Ma, ihe ọ nụrụ abụghị ihe o kwuru. Ihe a nwere ike isewere ha okwu.
O nwere ihe ị ga-eme ka ụdị ihe a ghara ịna-eme. Ka anyị kwugodị ihe nwere ike ime ka ị ghara ịnụ ihe nwunye gị kwuru n’agbanyeghị na i chere na ntị gị dị n’ihe ọ na-ekwu.
IHE NWERE IKE ỊKPATA YA
Ọ bụrụ na ị na-eche ihe ọzọ ma ọ bụ na ike gwụchara gị. Were ya na ụmụaka na-eme ụzụ, tiivi ana-ekwu, ị nọkwa na-eche banyere otú gị na ihe si gaa n’ụlọ ọrụ. Nwunye gị abịa na-agwa gị banyere onye ga-abịa ileta unu n’abalị ahụ. Ya ekwuchaa, gị ekwee n’isi. Ma, o nwere ike ịbụ na ị nụghị ihe o kwuru.
Ya kwuo ihe ọzọ, uche gị agbaga ebe ọzọ. Onye na-eme ụdị ihe a na-eme nwunye ya gwa ya ihe, uche ya agbaga ebe ọzọ. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na nwunye gị asị: “Ị naghị alọtazi ọrụ n’oge kemgbe izu a.” I nwere ike iche na ọ na-agwa gị okwu ọjọọ. Gị asị ya: “Ihe mere anaghị m alọtazi n’oge bụ ka m nwetakwuo ego ị ga-eji na-azụ nta na imoroko a ị na-azụ.” O nwere ike iji iwe gwa gị na ọ bụghị okwu ọjọọ ka ya na-agwa gị kama na ya chọrọ ka gị na ya nọrịa na Satọdee nakwa na Sọnde.
Ọ bụrụ na ebe obi gị na-adị bụ n’ihe a ga-eme. Otu nwaanyị kwuru na ọ na-abụ ya na-agwa di ya ihe na-enye ya nsogbu, obi ya adịrị n’ihe a ga-eme ka ihe dị mma. Ọ naghị ebu ụzọ ege ntị ka ọ mara ihe bụ́ nsogbu ya. O kwukwara, sị: “Ihe bụ mkpa m abụghị ihe a ga-eme ka ihe dị mma, kama ọ bụ ka o burugodị ụzọ nụkwanụ ihe na-enye m nsogbu.” Gịnị mere ntị di nwaanyị a anaghị adị n’ihe nwunye ya na-ekwu? Ọ na-abụ nwunye ya na-agwa ya okwu ya anọrọ na-eche ihe ọ ga-eme, n’ebughị ụzọ nụ ihe ọ chọrọ ịgwa ya.
Gịnị ga-enyere gị aka ịna-ege nwunye gị ntị nke ọma ma ọ na-agwa gị okwu?
Na-ege ntị nke ọma. Ọ bụrụ na o nwere ihe dị mkpa nwunye gị chọrọ ịgwa gị ya abụrụ na o nwere ebe obi gị dị, emela ka ị̀ na-ege ntị. Ọ ga-aka mma ma ị hapụgodị ihe ahụ gewe ntị n’ihe ọ na-ekwu ma ọ bụkwanụ gị agwa ya na ị ka ji ihe n’aka ka o chere ka i mechaa.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Jems 1:19.
Anapụla ya okwu n’ọnụ. Mgbe nwunye gị na-ekwu okwu, gee ya ntị nke ọma. Ya kwuchaa, gị ekwuwezie ihe ị chọrọ ikwu.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ilu 18:13.
Jụọ ya ajụjụ. Ọ bụrụ na ihe nwunye gị na-agwa gị edoghị gị anya, jụọ ya ajụjụ ka i wee ghọta ihe ọ na-ekwu. Nwaanyị ahụ anyị kwuru okwu ya na mbụ kwuru na obi na-adị ya mma ma di ya na-ajụ ya ajụjụ mgbe ọ na-agwa ya ihe. O kwuru na ime otú ahụ na-egosi na ọ chọrọ ịghọta ihe ọ na-ekwu.
Chọpụta ihe ihe o kwuru pụtara. Cheta na otú mmadụ si emegharị ahụ́ mgbe ọ na-ekwu okwu, otú ihu ya dị na otú olu ya si ada na-egosi otú ihe ọ na-ekwu si dị ya n’obi. Otú mmadụ si kwuo “Ọ dị mma” nwere ike igosi na ihe ọ na-ekwu bụ “Ọ dịghị mma.” Ọ bụrụ na nwunye gị asị gị “Ị naghị enyere m aka,” o nwere ike ịbụ na ihe ọ na-ekwu bụ na ọ dịghị ihe i ji ya kpọrọ. Gbalịa chọpụta ihe ọ chọrọ ikwu. Ọ bụrụ na ị chọpụtaghị ihe ọ chọrọ ikwu, ihe i chere na o kwuru nwere ike isere unu okwu.
Gee ntị n’ihe ọ bụla ọ na-ekwu. Ọ bụrụgodị na ihe nwunye gị na-agwa gị adịghị gị mma, ahapụla ya pụwa. Dị ka ihe atụ, gịnị ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na nwunye gị na-akatọ ihe i mere? Otu nwoke lụrụla nwaanyị ihe karịrị iri afọ isii kwuru, sị “Na-ege ya ntị. Chebara ihe ọ na-ekwu echiche. Ọ naghị adị mfe, ma ọ ga-abara gị uru ma i gee ya ntị nke ọma.”—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ilu 18:15.
Nwee mmasị n’ihe ọ na-ekwu. Ọ bụrụ na ị na-ege ntị mgbe nwunye gị na-agwa gị okwu, ọ ga-egosi na ị hụrụ ya n’anya. Ọ bụrụkwa na ọ na-amasị gị ịnụ ihe nwunye gị na-ekwu, ọ ga-adịrị gị mfe ige ya ntị mgbe ọ bụla ọ chọrọ ịgwa gị ihe. Ọ bụrụ na ị na-eme otú a, ọ ga-egosi na ị na-eme ihe dị ná Ndị Filipaị 2:4. Ebe ahụ sị: “Na-elekwasị anya, ọ bụghị naanị n’ọdịmma onwe unu, kamakwa n’ọdịmma nke ndị ọzọ.”
^ para. 4 Ihe e kwuru n’isiokwu a gbasakwara ụmụ nwaanyị ndị nọ na di.
“Mgbe onye ọ bụla na-aza okwu tupu ya anụ ya, ọ bụụrụ ya nzuzu na mmechuihu.”—Ilu 18:13.
‘Ntị ndị maara ihe na-achọ ihe ọmụma.’—Ilu 18:15.
MGBE Ị CHỌRỌ ỊGWA NWUNYE GỊ OKWU
Ọ bụrụ na nwunye gị nọ n’ime ụlọ ma ọ bụkwanụ na ọ na-eme ihe ọzọ, gị anọrọ ebe ọzọ na-agwa ya okwu, ọ̀ ga-anụ ihe ị na-ekwu? Ọ ga-aka mma ka ị gaa ebe ọ ga-anọ nụ ihe ị na-ekwu ma ọ bụ gị echere mgbe o mechara ihe ọ na-eme.—1 Pita 3:8.
Ì chetara ihe Jizọs mere mgbe ọ chọrọ ịgwa ndị na-eso ụzọ ya na ha kwesịrị ịdị umeala n’obi? Ọ gwaghị ha ya mgbe masịrị ya, kama, o cheere ruo mgbe ha ga-aghọta ihe ọ na-ekwu.—Mak 9:33-35; 12:41-44.
Na-akwanyere Di Gị Ma Ọ Bụ Nwunye Gị Ùgwù
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ihe Ga-enyere Gị Aka Ịna-ege Ntị nke Ọma
Ihe Unu Ga-eme Ka Ekwentị Ghara Ibutere Unu Nsogbu
Otú Unu Ga-esi Na-ekpebi Ihe Ga-adị Unu Abụọ Mma